JARDIINKA JARDIINKA AYAA AH HAB WEYN OO LAGU KALA QAYBIYO ADDUUNKA DHIRTA BEERTAADA - WARARKA
Sidee u koraan in mid ka mid ah dhirta Russia dhirta sii kordhaya cimilada hoosta? Tani, waxaa jira dhaqanka tubta ama sharciga.
Ku saabsan waxa ay tahay, waxa dhirta ay ku haboon yihiin in ay sii kordhaan tuubooyinka, sida loo doorto, dhirta iyo daryeelka si habboon iyaga, waxaan ka hadli doonaa maqaalkan.
Sidoo kale, tixgeli sida aad u isticmaali karto habkan beerta beerta.
Waa maxay jardiinka weelka
Dhirta Evergreen waxay ku koraan dheriyo ama dheriyo.
Dhirta xayawaanku ku badan yihiin guriga, iyo inta lagu jiro xilliga kulaylka waxay ku faraxsan yihiin isha xaaladaha dibadda, ay ku dhacaan tuubo ama qodaan carrada.
Doorashada dhirta lagu magacaabo waxaa loogu yeedhaa jardiinka weelka..
Baahida loo qabo habka noocaas ah ee beerta ayaa la xiriirta xaaladaha cimilada, la'aanta ciidda ku haboon. Nidaamkani waa mid aan lagu xakamayn karin xaaladaha magaalooyinka iyo marka lagu qurxiyo aagga meelaha la jiido.
Bannaanka beeraha ayaa ku booriyay inay beeraan digsi dhirta oo aan ku habboonayn beerashada ee ciidda Ruushka dhexe.
Mabaadiida doorashada qoryaha ee tubbada
Tuubooyinka waxaa loo isticmaalaa in lagu koro dhirta qalaad. Sida loo doorto geedo ka soo jiidaya xididada:
Noocyo ubax qurux badan oo dhir ah.
Geedo loo habeeyay si ay u gooyaan.
Si taxaddar leh u dooran miisaanka geedka: mugga taajka waa inuu ahaadaa mid isku mid ah dhererka dheriga.
Nidaamka xididka waxaa loo qaabeeyey inuu koro kiilo.
Marka aad iibsaneyso warshad, waxaad go'aamin kartaa in ay tahay tuubo ama koray dhulka. Geedka oo loo habeeyey nolosha wabiyada sanadaha badanaa wuxuu leeyahay caleemaha cufan ee dhulka xididadiisa, haddii dhulku ka soo baxo xididada, taasi waxay ka dhigan tahay in geedka laga dhex wareegay dhulka.
Mabaadiida loo doorto weelka dhirta
Waxaa jira weelal badan oo dhirta sii kordhaya. Waxaa lagu dooran karaa muuqaalka iyo alaabta.
Nidaamka dhejiska-dhejiska waxaa loo isticmaalaa in lagu daro qaybta qurxinta iyo balaastigga ee tuubada, oo leh heerkulka la rabo.
Weelasha "Smart" oo lagu sameeyay mabda'a dheriga dheriga ayaa leh nidaamyo waraabin ah oo la dhisay.
Shuruudaha lagama maarmaanka u ah beeritaanka:
Cabbirka dheriga waa inuu u dhigmaa miisaanka waraabka iyo xajmiga warshadda.
Fursadaha lagu dhajiyo dheriyo guri guri
Ku shaqeynta goob, waxaa suurtogal ah in la helo meel la jecel yahay oo lagu rakibo tuubo. Qarsoodiga ah qaabeynta bogga: waxaad ku qortaa isku xoqan geedo isku mid ah oo isku mid ah.
Fikrad ficil ah oo loogu talagalay u wareegida weelka waa in la isticmaalo gawaarida gawaarida.
10 ka mid ah dhirta ugu wanaagsan ee loogu talagalay xarigga dhexe ee Ruushka
Waxaanu qornaa fursadaha ugu badan ee la isku bedeli karo beerta haddii loo baahdo. Mid ka mid ah xaaladaha dhirta kuwaas oo xilliga qaboobaha waa in la dhigo meel hoose ee dheriga si looga fogaado hypothermia.
Evergreen xilli ubax qurux badan xilli ciyaareed 3-4. Waxay leedahay ubaxyo casaan ah, caddadiisu waa 1-3 mitir.
Waxay ku xiran tahay saytuunka qoyska, hoosaadada - Shiineyska iyo Japan ee Delaweya.
Buunshaha waxaa loo isticmaalaa in lagu abuuro tirooyin xayawaan ah iyadoo la isticmaalayo qaab.
Waxaa jira qadiyado Jabuut iyo Forchuna ah. Noocyada Cawriga waxay leeyihiin caleen kala duwan.
Warshadu waxay u nugul yahiin xayrta budada ah, buufinta iyo goynta goynta waa lagama maarmaan.
Ma koraan dhul furan. Dareenkooda waxtarka leh ee timaha timirta waxay suurtogal u tahay inay abuurto qaabab qurux badan. Way ka fiican tahay in laga fogaado qulqulka, waxaa lagu talinayaa in la bacrimiyo ciidda leh Bacriminta.
Waxay u egtahay qoyskeeda casaan. Its cagaaran cagaaran madow muuqaal qurxoon, maskaxda ku hay in geedka waa sun.
Geedka shimbiraha ah ee asaliga ah wuxuu ka sii daraa tuubo ka badan hawada, wuxuu u baahan yahay waraabin dhexdhexaad ah.
Duufaan iyo shuban, waxay ka mid yihiin kutrovyh qoyska. Caan ka ah oleander ka mid ah dadka degaanka xagaaga waxaa lala xiriiriyaa quruxda ubaxa ee dhammaan sanamyada casaan iyo casaan cad.
Waa in laga ilaaliyaa cimilada qabow, u diirisaa kuleylka xagaaga, uma baahna meelaynta hooska.
Qoyska qarsoodiga ah ayaa hodan ku ah geed cagaaran oo dhir ah oo qurux badan oo u eg dhuxul.
Waxaan ku faraxsanahay inaan u isticmaali karo fasaxyada sanadka Cusub, oo lagu qurxiyo lafaha cawska leh - qaab weyn oo loo qurxiyo barxadda ama balakoonka.
Waxaa jira holly iyo qaab ah geed, kaas oo ku habboon ee xoqista, taas oo kuu ogolaanaya inaad koraan tirooyinka noolaha.
Qaybta Oriental ah
Cawska qumman ee laguma dhex beeri karo ciidda furan, dhererka kobaca - xalka keliya. Si looga fogaado dilitaanka ciidda, dib u celi geedka marka uu korayo ama jarayo xididada ayaa lagula talinayaa.
Buulo siinaya qolka timo jarista ... Waxay u habboon tahay qaababka kala duwan.
Faa'iidooyinka dhaqanka fanka
Waxaad dooran kartaa doorasho qalaad.
Awood u leh inuu guuro.
Qaadashada qurxinta ee dalalka koonfurta.
Dhibaatooyinka dhaqanka sheygaarka
Qadar yar oo ciid ah ayaa isticmaala Bacriminta.
Wuxuu u baahan yahay waraabin soo noqnoqota, xaddididdu waxay horseedi kartaa dhimasho.
Muraayad ayaa loo baahan yahay si loogu rakibo dibadda.
Awoodda qaadista way adkaan kartaa.
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu bilaabo abuuritaanka waa bilowga gu'ga. Beerto waxaa lagu sameeyaa mabda'a qolka beerto.
Waa in la ogaadaa in ciidda loogu talagalay tubbadu ay tahay iftiin, sidaas darteed culeyska mulkiilaha dhagaxyada ama foornada ayaa loo baahan yahay.
Isbedelka waxaa loola jeedaa iskuulada kadochny ee koritaanka hawada cusub, iftiinka iftiinka, roobabku soo baxaan, iyo isbedelada qoyaanka.
Tababbarka tartiib-tartiibka ah, waxaa wanaagsan in dhirta gawaarida lagu raro tareemooyin dhowr saacadood ah goobaha goobta laga ilaaliyo roobka, qorraxda iyo guska dabaysha.
Muddada joogitaanka waddooyinka waddooyinka ayaa kordhaya maalin kasta. Tuujadaha degdega ah ee ka yimaada microclimate guriga ee waddada ayaa burburin kara dhirta furka leh.
Dib u soo celinta dherer weyn ayaa sidoo kale la soo saaray March, nooca carrada waxaa loo xushay nooca warshadda. Dhuxulo badan ayaa lagu qurxin karaa ivy.
Ka dib markii dheriga lagu qodo ciidda, daryeel dheeraad ah ayaa loo baahan yahay:
geedka la jarjaray;
Waa lagama maarmaan in la baddalo dhulka guga. Habka isugeynta jeermiska waxaa lagu fuliyaa hab gaar ah.
Goobta goobta ku jirta weelasha dhoobada ayaa ah hab weyn oo loo abuuro qaab qurxoon oo ka mid ah xarigga dhexe ee Ruushka.